Sweet Melody in the Rain: 2009
မင်းကိုယ်နဲ့ အတူလိုက်သေမှာလား ..........
ကိုယ့်ကိုမသေပါနဲ့ ဆိုပြီး တောင်းဆိုလေမလား ..........
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုယ့်ကိုကြည့်လေမလား ..........
ကိုယ့်ရဲ့ အသက်မရှိတဲ့ body ကိုပန်းများပေးလေမလား ..........
ကိုယ်သေသွားပြီဆိုတာကို မင်းလက်ခံမှာတဲ့လား ..........
တသက်မှာတခါပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုယ့်ကို သတိရပါ့မလား ..........
Posted by Melody at 1:43 AM No comments:
ဟိုးတုန်းက မင်းရဲ့ အကြည့်တွေ
ဟိုးတုန်းက မင်းရဲ့ အပြောတွေ
ဟိုးတုန်းက မင်းရဲ့ အပြုအမူတွေ အောက်မှာ….
- နှလုံးသားလေးတစ်ခု (ဟိုးတုန်းက)
- သူ့ ရဲ့ နှလုံးခုန်သံကို
သူ့ ရဲ့ အသံကနေ
Posted by Melody at 1:34 AM No comments:
မနေနိုင်၊ မထိုင်နိုင်အောင် လွမ်းတယ်။
ဘာမှလုပ်လို့ မရအောင် လွမ်းတယ်။
ဘယ်နားရောက်လို့ ဘာလုပ်နေမယ်မှန်းမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လွမ်းတယ်။
မလွမ်းမိအောင်ထိန်းနေရင်းကကို ထိန်းလို့ မရအောင် လွမ်းတာ။
- ကိုယ့်ကို လွမ်းရဲ့ လားလို့ မမေးသလို
သတိရရဲ့ လားလို့ တောင် မမေးပါဘူး။
"ဟင့်အင်း" လို့ ဖြေလိုက်မှာ
သူ့ ဆီက ဖုန်းကို ပဲ
- သိစိတ်ကတော့မင်းခေါ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပေမယ့်
ကိုယ့်ရဲ့laptop မဟုတ်တဲ့laptop
အဲဒီ laptop လေးကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အနားမှာ အမြဲတမ်းလို လို ရှိခဲ့တာ။
အိပ်ရင်တောင် သူ့ ဘေးနားမှာပဲ ကိုယ်အိပ်တာ... နေ့ ရက်တွေကို ဆက်လို့ ။
တခါတလေ တရေးမှ မအိပ်တဲ့ညတွေမှာ ကိုယ့်ကို အဖော်လုပ်ပေးတာဆို လို့ သူပဲရှိတာ....
တခါတလေ ကိုယ်သာအိပ်ပျော်သွားတယ်။ သူကတော့ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ငုတ်တုတ်။
ူlaptop ရယ်။ မင်းမရှိရင်ကိုယ်လွမ်းနေမိမယ်။ မင်းသခင်ကို ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဒီမှာ လွမ်းနေမှာပဲလို့ ။ သနားပါတယ်လို့ ။
ဒီလောက်အချိန်တိုအတွင်းမှာ မင်းကို သံယောဇဉ်တွယ်မိလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။
မင်းမရှိတဲ့ညတွေမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နေတတ်အောင်ကြိုးစားရအုံးမယ်။
မင်းဟာကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက် ဖြစ်နေမှာပါ။
Brand ကြက်ပေါင်းရည် ၀ယ်မပေးပါနဲ့ 
လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည် ၀ယ်မပေးပါနဲ့ 
starbuck က၀ယ်လို့ ရတဲ့
ကော်ဖီတစ်ခွက် ၀ယ်မပေးပါနဲ့ 
၀ယ်လို့ ရတာ ၀ယ်မပေးပါနဲ့ 
(တကယ် လိုအပ်နေတာ) လိုချင်နေတာ
အဲဒါတွေ မဟုတ်လို့ ပါ။
Posted by Melody at 11:47 PM No comments:
- မွေးနေ့ မှာ
- ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူနေနိုင်ကြပါစေ
- အတူနေတဲ့သူနဲ့ လည်း အဆင်ပြေကြပါစေ
- အဆင်ပြေစွာနဲ့ ပဲ သားတွေ၊ သမီးတွေ၊ မြေးတွေ၊ မြစ်တွေနဲ့ အတူ အဖေ၊အမေ၊ အဘိုး၊ အဘွား တွေက်ို ကန်တော့နိုင်တဲ့ သူဖြစ်နိုင်ပါစေ။
- မငယ်တော့တဲ့အသက်တွေနဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
- ဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပေမယ့်
The number you have dialed.... blur blur blur ... ဆိုတဲ့ အသံပဲထွက်လာတယ်။
အဲဒီအသံကြားကတည်းက ပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေလည်းပျောက်သွားတယ်။ ပြန်ခေါ်မလားလို့1 min စောင့်မယ်။ ဒီကြားတည်းမှာ သောကတွေပွားမယ်။
ဘာလုပ်နေလို့ ဖုန်းမကိုင်ရတာလဲ။ Busy နေလို့ လား၊ Toilet ထဲမှာမို့ လို့ လား။
အဲဒီလောက်ထိ busy နေရအောင်ဘာလုပ်နေလို့ လဲ။။။။။။
- ဒါဏ်ရာတွေ မပေးပါနဲ့ 
- အကြင်နာတွေ မပေးပါနဲ့ 
- မျှော်လင့်ချက်တွေ မပေးပါနဲ့ 
ဘာမှမပေးဘဲနဲ့ လည်း မနေလိုက်ပါနဲ့ 
အချစ်တစ်ခုတော့ ရယူချင်လို့ ပါ။ :P
Posted by Melody at 1:18 PM4comments:
တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကလေး နေနေတဲ့ ဘ၀ထဲကို ဘာလို့ လာချင်ရတာလဲ။
restricted person only ဆိုတာ မသိဘူးလား??
သတ္တိရှိရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ ရတယ်။ စိတ်မဆိုး တတ်ဘူး။ အင်း ... ဒေါသပဲထွက်တတ်တာ။ :P
ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်ကပေးမှ သူပေးတာ ကိုယ်ရမယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ။
(တို့ တွေရဲ့ ) ခြေရာလေးတွေ ....
- Riverside မှာ
- Library မှာ
- အမှတ်ရစရာလေးတွေနဲ့ 
အမှန်အတိုင်း ပြောဖို့ ဝန်လေးတတ်တဲ့
စကားလုံးတွေနဲ့ပြောမယ့်အစား
မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်ရမလား ... ။
အခု ကော်ဖီသောက်တာ အရမ်းခါးနေတယ်။ မသောက်နိုင်လောက်အောင်ကို ခါးနေတယ်။
နေ့ တိုင်းသောက်နေကျကော်ဖီကတော့ quality ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ feeling ပဲပြောင်းလဲသွားတာ။
coffee သောက်နေကျစိတ်က Iced Tea ကို သောက်ချင်လာတာ။
မင်း Online မဖြစ်ပဲနဲ့away ဖြစ်နေရင် စိတ်ထဲမှာ အလိုမကျတာ။
ဖုန်းခေါ်တာကို မင်းမကိုင်ရင် ဒေါသထွက်တာ။
Posted by Melody at 3:50 PM3comments: